किन पाउदैनन् हाम्रो मातृभाषालाई मान्यता ? देवनागरी लिपिमा लेखिने ‘नेपाली भाषा’ कसरी लेखिन्छ ? कसरी लेखिनु पर्छ र कसरी लेखिनु हुँदैन ?
काठमाडौं । लकडाउनकै बीच केही दिनयता सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताको दौडधुप तीव्र बनेकोे छ । बन्दाबन्दीले मुलुक ठप्प रहेका बेला नेताहरुको अस्वभाविक दौडधुप र कोठे बैठक बाक्लिएपछि नेपाली राजनीति भने चलायमान नै रहेको संकेत दिएको छ ।
कोभिड १९ को परिभाषाबाट कोरोना बारे हामी सबैलाई परिचित गराएको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूख्यमन्त्रीहरुकोसँगको ‘भिडियो सम्मेलन’ मा ‘कोरोना भाइसर’का बारेमा गरेको परिभाषापनि चर्चामा छ ।
नेपाल एक बहुलभाषिक, बहुलधार्मिक, बहुलजातीय र बहुलसांस्कृतिक मुलुक हो । सबै भाषा, धर्म र संस्कृति संरक्षण गर्न युवा पुस्ताको दायित्व महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
विश्वमा नै नेपाल भन्ने वित्तिकै भौगोलिक विविधता, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय समुदाय भनेर चिनिन्छ । यसमा पनि विशेषत हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा जातिको पहिचान नेपालका अन्य समुदायको भन्दा बेग्लै छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ५९ जनजाति मध्ये शेर्पा पनि एक हो आदिवासी जनजाति हो । शेर्पाहरु विगत ७ सय बर्ष अगावै खाम मिञ्ग नेपालको पूर्व भाग खुम्बु क्षेत्रको नाङपाल ५ हजार ८ सय मि. नाका मि बाट नेपाल प्रवेश गरेको इतिहास देखिन्छ ।